Sarkaal Taraafiko ah oo xalay lagu dilay Muqdisho & labo ruux oo loo qabtay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sarkaal Taraafiko ah oo xalay lagu dilay Muqdisho & labo ruux oo loo qabtay
7th July 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Saraakiil ka tirsan ciidamada amaanka Soomaaliya ayaa sheegay in labo qof loo qabtay dil xalay agagaarka Hotel Lafweyne ee degmada Kaaraan loogu geystay sarkaal ka tirsan ciidamada nabadgelyada wdooyinka ee Taraafiko, kaasoo la oran jiray Xidigle Yuusuf Xasan Caddow “Yuusuf Taraafiko”.
Kooxda falka dilka ah geystay oo ka koobnaa saddex ayaa sida ciidamadu sheegayaan laga qabtay labo ka mid ah, islamarkaana ay ku raadjoogaan qofkii saddexaad.
Mid ka mid ah ehellada labada wiil ee loo heysto dilka ayaa warbaahinta u sheegay in labada qof ee la qabto aysan wax shaqo ah ku laheyn dilkaas.
Ninkaas ayaa sheegay in labada wiil laga qabtay xaafada Taleefishinka ee degmada Kaaraan, sarkaalka Taraafikadaha ahna lagu dilay agagaarka Hotel Lafweyn.
Sarkaalka taraafikada ah ee xalay lagu dilay Muqdisho ayaa noqonaya askarigii shanaad ee ciidamadaas ka tirsan ee Muqdisho lagu dilo tan iyo markii ay bilaabatay bisha Ramadaan.
Taliyaha ciidamada ilaalada waddooyinka Muqdisho, Jen. Cali Xirsi Barre (Cali Gaab) ayaa dilka askarigan oo oday ahaa muddo dheer ka tirsnaa taraafikada u xaqiijiyay warbaahinta qaybaheeda kala duwan.
Cali Gaab ayaa tilmaamay ineysan dilalka socda u joojin doonin shaqada ay hayaan “Waan laba-laabaynaa shaqada aan dalka iyo dadka u hayno. Howsheenna waa howl aad muhiim u ah oo muddo soo jirtay, mana dhacayso in hanjabaadda Al-shabaab u joojinno,” ayuu yiri Jen. Cali Gaab.
Afhayeenka Alshabaab, Cali Dheere ayaa dhawaan warbaahinta u sheegay iney muddo ka wareeganayeen ciidamada Taraafikada, balse haataan ay ku dilayaan halkii ay ku arkaan, maadaama sida uu yiri ay waddo kasta taagan yihiin.
“Wax badan ayaan ka leex-leexannay ciidamada loo yaqaan taraafikada ee waddoooyinka taagan, waxaana u aragnaa inay yihiin kuwo dhibaato weyn ku ah bulshada, meel walbana firinbi la taagan, waana ka wareejinaynaa wixii hadda ka dambeeya haddii aan ku aragno iyagoo waddooyinka taagan,” ayuu yiri Cali Dheere.
Shalay ilaa xalay waxaa Muqdisho ka dhacay saddex fal oo dil ah, iyadoo sidoo kale la dilay gudoomiyihii Laanta Horseed ee degmada, Hodon Colow Xasan Cusmaan iyo gudoomiye ku xigeenkii Ururka dhallinyarada degmada Hiliwaa Maxamed Toxob Calasow.
Dhanka kale, waxaa dil ka badbaaday mas’uul ka tisan shaqaalaha dowladda Soomaaliya, kaasoo gaarigiisa lagu xiray miino, kaasoo qarxay xilli gaarigu kaligiis yaallay goob gaadiidka la dhigto.
RW Cabdiweli oo u hanjabay shakhsiyaad lagu eedeeyey qalqalgelin